mairie-antananarivo – Fandaminana ny parking sy ny mpivarotra hanimaska amoron-dalana
administrateur 26 jolay 2018 Commentaires fermés
Nanao valandresaka tamin’ny mpanao gazety tetsy amin’ny firaisana fahatelo ny Delegen’ny Boriboritany fahatelo Rado Andriamamonjisoa androany 26 jolay 2018. Nanambara izy fa hisy fandaminana tsy maintsy atao manomboka etsy amin’ny “irresistible” hatrany amin’ny TOTAL Tsiazotafo , araka ny vinan’I Ben’ny Tanàna Lalao Ravalomanana. Izany no hatao nohon’ny fahitana ny fikorotanana sy ny fahateren’ny lalana noho ny fisian’ny ireo fiara mijanona tsy nahazoana alalàna amin’ny CUA, indrindra ireo fiara maro maty mipetraka eny; Eo koa ny fisian’ny ireo mpivarotra hanimasaka maro mivarotra eny amoron-dalana izay miteraka tsy fahasalamana ho an’ny olona.
Araka izany dia mampafatatra sy manao antso avo an’ireo olona rehetra mampiasa ny io lalana io (tranombarotra, mpivarotra hanimasaka sy ireo fiara mijanonana tsy nahazoana alalana ary ny sarety mivezivezy mitaditra entana amin’ny ora tsy ara-dalana) ny Delegen’ny boriboritany fahatelo mba hiala eo amin’ireo toerana voafaritra ireo, manomboka rahapitso 27 jolay amin’ny 6 ora maraina ; Fa hisy ny fanadiovana izay ataon’ny kaominina Antananarivo Renivohitra. Hisy ny fepetra ejana izay ho raisina amin’ireo tsy manaraka ny fandaminana ny fandraofana ireo fiara sy ny entana mbola hita fa mijanona eny.
Hentanina hatrany ireo olona voakasika rehetra mba hanaraka izany fandaminana izany. Marihana fa efa nisy fampilazana mialoha ho an’ireo mpivarotra sy mpampiasa lalana ny elany izy ireo teo. Ka rehefa vita ny fandaminana dia manentana hanaja ny fahadioavana sy ny lamina izay napetraka.